म, सपना अनि त्याे रात !! - Everest Dainik - News from Nepal
म, सपना अनि त्याे रात !!
उत्सव बजगाई ,
समानता न‌ै समानताकाे बिच एक बिखण्ड बिस्तारवाद समयकाे बिचाैलिया खडा हुन्छ् । अन्धकार समय उजाडिदाे हावा फुस्स फुस्स बहन थाल्छ ।
म निर्जन अन्धकारमा लटपडिरहेकाे हुन्छु। त्याे झुपडी बर्खे झरी त्प -त्प गरि अाफु सुत्ने बिस्तारामा झरी रहेकाे हुन्छ। अामा लस्याङ-फस्याङ गर्दै छटपटिरहेकि हुन्छिन । बा ! दिनभरीकाे कामले थकान महशुश गर्दै माली गाई दुदै हुन्छन् । भाइ निन्द्राले बेजाेड भईसकेकाे हुन्छ ।
गरिबकाे झुपडी मिठाे मसिनाे पाक्न चाडवाडै अाउनु पर्थ्याे । जे थियाे त्यहि मिठाे मानेर खायाैं । करिब रात काे १० बजिसकेकाे रहेछ। भाइ एकातिर म अर्काेतिर बिस्तारा लगाएर सुत्याै १२ बर्षकाे भाइ बिस्तारामा पल्टिना साथ निदाएछ। म बियाेगान्त भाकाे मुटु र अस्थिर भाकाे मस्तिष्क लिएर कसरी पाे निदाउन सक्थे र !
मनमा अनेकाै कुरा खेल्न थाले , जिन्दगी ,समय अनि परिस्थिति बिषयमा मनमा टिप्पणी हुन थाले । मनमा गुम्सिएका पीडा र कुराहरु समुन्द्र मा सुनामी अाए झै छछ्लकिन थाले । जिन्दगीमा अाधी अाए सरी भाे । सबै पिर ब्यथालाई सानताेना दिदै एकातिर पाखा लगाए । निन्द्रा लाग्दै लागेन एकपाखे घरकाे झ्याल करिब एउटा मात्र हुन्थ्याे ।झ्याल खाेले र अाकाश तिर फर्किए अाकाश पनि निचाेरेकाे कागती जस्तै भई मडारी रहेकाे रहेछ । यश धर्ती ले बुझ्ने मेराे मर्म त्याे अाकाशले पनि बुझ्दाे हाे र पाे मडारी दाेहाे भन्ने कल्पना गरे र मनलाई सान्तवना दिए ।
रातकाे १२ बजिसकेकाे रहेछ भित्ते घडिले पनि टिक-टिक अावाज पस्किरहेकाे थियाे ।जेनतेन मनलाई सान्तवना दिदै बिस्तारामा गएर पल्टिए ! मन मा तछाडमछाड भएर कुरा खेलिरहेका थिए ! मध्य रातकाे समय भएर पनि हाेला र दिनभरीकाे थकानले कथित भएकाे शरीर भएर पनि हाेला भुसुक्क निदाएछु । निदाएकाे केही समय पछि अाधि ,बाढी भुत प्रेत पिचास अाएर शरिरलाई दुख दिएर थिचे जस्ताे भयाे ।
मन निकै अत्तालिरहेकाे थियाे करसब केही समय पछि मलिन अावाजमा कसैले स्पर्श दिदै बाेलाए झै लाग्याे । मन झन हत्तासियाे केबल मात्र प्रिय भनिरहेकाे अावाज गुञ्जिरह्याे । मायालु स्वर कसैले बाेलाए पछि याैवनकाे समय मन त्यतिकै प्रफुल हुन पुग्दछ । केथा उक्त स्वरले परिणामकाे खाेजिरहेकाे र शरीर मागिरहेकाे छ भन्ने कुरा ! धेरै समय बाेलाएपछि म अडिक भएर पछाडी फर्कन पुग्दछु पछाडिबाट स्वर्गकि अप्सरा जस्ती महिला मायाकाे स्पर्श दिदै ,सुस्तारिदै र सुस्केरा हाल्दै अाउदै थिन ! मन कथा-कता डराईसकेकाे थियाे ।
म एकाग्रता भएर उनिलाई रहिरहन्छु ।उनिले अाेठ टाेक्दै प्रेमिल बात संगै भाब पस्किसकेकि थिईन । मलाई कता-कता अनेकाै साेच अाईरहेकाे थियाे मन भक्कानिएर चङ्गा सरी उडिसकेकाे थियाे । अफसाेच साेचिरहेकाे थिए ,पक्कै केही रहस्य घुलेकाे हुनुपर्छ याे प्रेमिल स्पर्शमा झै लागिसकेकाे थियाे ।उनी जति नजिक अाउदै थिईन त्यति नै मनमा ढुक्क ढुक्की बढ्दै थियाे। सुनसान ठाउँ एक महिला अनि म एकल पुरुष मैले याे कल्पना गर्न सकिरहेकाे थिन ।
साेचे सुर्य लाई कुहिराेले ढाके पछि मात्र बादल लाग्दछ । केही नतिजा पाउन केही समय धर्यधारणा हुनै पर्छ झै लाग्याे । म अडक रहिरहे !! उनी मलाई एक्कासि झम्टे झै अङ्कमाल मार्दै चिच्याउछिन । उनकाे मलाई फसाउने षड्यन्त्रकाे झालाे बाट पनि फुत्किन पुग्दछु ।उनकाे मलाई फसाउने षड्यन्त्र पनि सपना मा मात्र सिमित रहन्छ । मेराे पनि सपना ,सपना मै लरबराउछ ।( सपना केबल सपना)!!! म हतासिदै बुउझिन्छु ।मन अत्तालिन्छ ,शरीर पुरै पसिना ले निथुक्र भिजिरहेकाे हुन्छ । अतालिदै पानी पिए! मनलाई केही राहत पुग्न पुग्छ । हतासिदै अाडैमा रहेकाे टुकि बत्ती बाले बिहानकाे करिब ५ बजिसकेकाे रहेछ । त्यसपछी बिस्तारामा अडिन मनै लागेन कर्म र धर्म दुबैमा बराबरी अास्था राख्ने भएर हाेला ।
त्यसपछि नित्यकर्म र सत्कर्ममा निस्किए । म ज्याेतिष शास्त्रमा पनि बिश्वास गर्ने मान्छे ज्याेतिष शास्त्रले पनि मलाइ महिलासंग सजक रहनु भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेकाे हुन्छ । किन किन मलाई सपनामा मात्र हैन बिपनामा पनि महिला संग नजिक रहन घुलमिल रहन निकै डर लाग्छ र लागिरहने छ । अज्ञात महिला अनि सपना !…..